I-PA002 - I-Alarm Yomuntu Ephuthumayo Yomshoshaphansi ye-OMG - Izixazululo ze-OMG
Vula: i-130 db. i-siren
I-Compact: Kuphela i-3.4 x 1.22 x i-0.51. + I-TSA ivunyelwe
Isisindo esincane: Ngaphansi kwe-1 ounce (20g)
Ukuphila kwesikhathi eside: ukusetshenziswa kwe-alamu yamahora angu-30
Ukusetshenziswa okuningi: Qinisekisa iphini bese uphinde usebenzise
Sizalelwa abahloli bamazwe. I-SOUND GRENADE + isisiza ukuba sihlole ngokuzethemba. Kuyinto i-alamu ye-ultra-compact yomuntu siqu, isayizi encane kodwa enkulu enomsindo. Uma ususa iphinikhodi, idivayisi ikhipha i-130 decibel (i-ambulensi-level) alamu. I-siren izozwakala ngokuqhubekayo kumaminithi we-30 ngaphandle kokuthi iphini libuyiselwe kudivayisi. I-SOUND GRENADE + ivumela usizo oluningi kulabo abahlose ukusebenzisa ngaphandle ngaphandle kwesihlangu esinamanzi enjoloba enenjoloba. Isici esisezingeni elingezansi se-hook senza ukwakha okulula kwe-tripwire noma i-alarm alamu. KUHLANGANISIWE: Ibhethri ne-Metal Carabiner.
Ukulula kuyisihluthulelo kunoma imuphi umkhiqizo omuhle. Ukuphepha komuntu akuhlukile.
Compact futhi ephathekayo
Ungayiphatha kanjani into enkulu futhi enkulu? Impendulo awukwazi. Sidale i-alamu ye-SOS Encane Kunazo Zonke Emhlabeni. Eqinisweni, uma uthola okuncane + okukhanyayo + okukhulu kakhulu, sizokunikeza okwethu mahhala.
Vele ugcwalise i-PIN ukuze isebenze.
Iza nge-hook eyengeziwe ye-flywire esheshayo noma elula noma i-alamu ye-perimeter yekhamera yakho noma i-camper van.
I-Personal Safety Tech, eyenziwe kahle
Siyakha futhi senze amadivayisi angcono kakhulu okuphepha emhlabeni.
Ukubuka okuphelele kwe-3603 Ukubuka kwe-1 Namuhla